आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (८ चैत २०७८ बुधबार, २१ अप्रिल २०२१) – BUSINESSPANA.COM
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (८ चैत २०७८ बुधबार, २१ अप्रिल २०२१)
श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ राक्षस नामक संवत्सर वसन्त ऋतु वि.सं. २०७८ वैशाख ८ गते तद्अनुसार सन् २०२१ अप्रिल २१ तारिख बुधबार चैत्र शुक्लपक्ष नवमी तिथि अश्लेषा नक्षत्र शूल योग बालब करण आनन्दादिमा राक्षस योग चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ५ः३६ मा भयो र सूर्यास्त साँँझ १८ः३१ मा हुनेछ । श्रीरामनवमी व्रत, श्रीरामजयन्ती, श्रीराम यात्रा, छन्द दिवस ।
मेष – रोकिएको काम बन्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । सुख सम्पति मान महत्त्व बढ्नेछ । आमोदप्रमोदमा रमिरहनु हुनेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ला । आशा उत्साह बढ्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त होला । यात्रामा सफलता प्राप्त होला । ख्याति फैलिनेछ । मांगलिक कार्यमा पनि सफलता मिल्नेछ ।
सिंह – शुभ र भाग्यवर्द्धक काममा सफलता मिल्नेछ । हाकिमको साथ मिल्नेछ । कर्ममा रुचि बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्नेछ । लगानी उठ्ला । खेलकूदमा भाग लिनुहुनेछ । यात्रा गर्नुहुनेछ । सुख आनन्द बढ्ला । धनसम्पत्ति बढ्नेछ । सुख सम्पदा बढ्ला । आरोग्यता वृद्धि होला । मित्रजनको साथ मिल्नेछ । ऐश्वर्य बढ्नेछ । बौद्धिक रचनात्मक र कलात्मक काममा सफलता मिल्नेछ । पारिवारिक सुखशान्ति बढ्नुको साथै कार्यमा सफलतमा मिल्नेछ ।
कन्या – समस्या समाधानका लागि विवाद आदिमा पर्नुबाट बच्नुहोला । शुभ काममा प्रवृत्ति बढ्ला । मान महत्व बढ्ला । भ्रमण होला । अरुको भरभन्दा आफ्नै बलविवेकले काम गर्नु उचित हुनेछ । ऐनकानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ला । स्वास्थ्यप्रति पनि सचेत रहनुपर्नेछ ।
वृश्चिक – धन सम्पति बढ्ला । साहसिक काम बन्नेछ । मान महत्व बर्चश्व बढ्नेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त होला । सुख आनन्द बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । विजयश्री प्राप्त होला । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । सुख–सुविधाको वस्तु अरिद गर्नुहुनेछ । योजना र बजेट बनाइ कार्य गरे सहज होला । ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ ।
धनु – सुख र सफलता बढ्नेछ । अन्नधनमा वृद्धि हुनुको साथै आयस्रोतमा पनि बढोत्तरी होला । रोकिएको काम बन्नुसँँगै उधारो लगाइएको धन पनि उठ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य काम बन्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । गीतसंगीत र रसरागात्मक काममा आकर्षण बढ्नेछ । इष्टमित्रको साथ मिल्नेछ । सन्तानसुख बढ्ला । प्रेममा सफलता प्राप्त होला ।
मकर – ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । नियमकानूनले साथ दिनेछ । दायित्व पूरा गर्नुहुनेछ । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित नहोला । योजना र बजेटमा बल बढ्नेछ । राजकीय काम गर्नु बेस रहला । आयस्रोत बढ्ला ।
Previous: सरकारी मूल्यमा गहुँ खरिद शुरू
Next: सिटिजन्स बैंकको खुद नाफा बढ्यो, चैत मसान्तसम्ममा १ अर्ब ५४ करोड कमायो